Kooxda Jubbaland Concern oo baaq soo saartay: “Hiiraan iyo Bay maamul madaxbannaan hasoo samaystaan Kismaayona dawladdaa maamul usamaynaysa!” – Taleex Media Online Edition: International | Home
Published On: 8 October 2012 6:14 pm Wararka | By taleeh Kooxda Jubbaland Concern oo baaq soo saartay: “Hiiraan iyo Bay maamul madaxbannaan hasoo samaystaan Kismaayona dawladdaa maamul usamaynaysa!”
Hay’adda Jubbaland Concern Group (JCG) waxey marka ugu horeysa umadda Soomaaliyeed meelkasta oo ay joogto ugu hambalyeyneysaa in manta Soomaaliya ay yeelatay dawlad qaran oo laga baxay xiligii ku meelgaadhka ahaa. Iyadoo ay jiraan caqabado badan oo ubaahan fiiro iyo taxaddar gooni ah haddana JCG aaminsantahay inay lagama maarmaan tahay in dalka lagu hoggaamiyo caddaalad iyo sinaan aan lahayn eex iyo nin ama beel jecleysi si aan loogu laaban sanadihii xanuunka badnaa ee taariikhda inoo galay.
Intaas kadib hay’adda JCG waxey umadda Soomaaliyeed ugu baaqeysaa isla markaana ka digeysaa inaan dib loo raadinin halaaggii iyo dhibaatooyinkii ina soo maray oo dhamaantood ka dhashay caddaalad xumo.
Hay’adda JCG waxey ka digeysaa in Madaxweyne Xasan uu ka feejignaado waxyaabaha kala fogeyn kara siyaasadda Soomaaliya iyo kala tagga umadda waxaana looga fadhiyaa inuu noqdo shakhsi aan ku xirnaanin beelo gaar ah iyo shakhsiyaad dano gaar ah leh, waxaana looga fadhiyaa inuu talaabo iyo hadalwalba miisaamo. Waxaa jira hadallo colaad mooyee aan ciidan iyo cawo midna kuu keeneynin sida midkii maalinkii dhaweyd uu Baladweyne ka sheegey. Waxaa laga rabaa madaxweynaha inuusan fududaanin, indhaha iyo dhagahana furo.
Ugu danbeyn hay’adda JCG waxey umuuqda ifafaalo dhiileysan oo magaalada Muqdisho laga shidayo waxaana habboon in Muqdisho aysan noqonin Maroodigii eegayay Takarta kale ee aan tiisa arkeynin. Waxaana uga digeynaa madaxweynaha Soomaaliya inuu ahaado kuna sifeysmo nin Soomaali oo dhan ay dooratey ayna caddaalad kasugeyso. Wanaagga Soomaaliya maanta gaadho miisaan badan ayuu Madaxweyne Xasan ku yeelan doonaa sidoo kalena haddii tala xumayaal badan la dhageysto waxuu dalku halis ugu jiraa in dib loogu laabto 1991 waxaana jira dano intii hore ka xoog badan oo sugaya in fursaddaasi timaaddo oo Soomaali dhexdeeda beelo isku layso si ay fursad ugu helaan damacooda gurracan.